साहित्य/मनोरञ्जन – ।।दाङ खबर।।
Home / साहित्य/मनोरञ्जन
गायिका आस्था राउत र ज्योति मगरबीच ‘वाकयुद्ध’ जारी छ । केही दिनअघि गायिका राउतले फेसबुकमा राम्रा र मीठो स्वरका धनी भएकाहरू घरमै बसेका र अश्लील र नांगो नाच गर्नेहरू महोत्सवमा बिकेका छन् भनेर लेखेपछि दुई गायिकाबीच ‘वाकयुद्ध’ सुरु भएको हो । ‘कति स्वरका धनी चेलीहरू घरमै बस्नु प¥या छ, अश्लील …
जीवनमा कहिले काहिँ छुट्न नचाहेकै मान्छेसँग टाढिनु पर्छ त कहिले भेट्न नचाहेकै मान्छेसँग सजिलै जम्काभेट हुन्छ । यस्तै एक घट्ना घट्यो अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री पूजा शर्माबीच पनि । वर्ष २०७२ मा रुचाइएको फिल्म प्रेमगीतमा यो जोडीलाई दर्शकले देख्न पाएका थिएन । यसपछि एकाएक यो कपल खोलाको दुई किनारा …
नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री रेखा थापा अहिले फरक अभियानमा छिन् । उनी अहिले रिल लाइफ छाडेर सामाजिक अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत भैरहेकी छिन् । वालविवाहजस्तो कुरीति र कुसंस्कारका कारण धेरै नेपाली महिलाहरू कष्टको जीवन जीउन बाध्य छन् । उमेर नपुग्दै विवाह भएपछि उनीहरू अनेकन समस्याले जेलिन्छन् । कतिपय त मुत्युको मुखसम्म पुग्छन् …
फिल्म शत्रु गतेुले प्रदर्शन सुरु गरेको छ। सोलो रिलिजको मौका पाएको यो फिल्मले देशभरबाट एक सय १० वटा हल पाएको छ। मल्टिप्लेक्स हलहरूमा पनि फिल्मको सो उच्च छ। फिल्मले क्युएफएक्स च्यानल अन्तर्गतको हलमा २२, बिग मुभिजमा नौ, एफक्युबमा आठ, सिने डी सेफमा १०, बीएसआर मुभिजमा आठ र क्युज सिनेमाजमा सात …
फिल्म ‘मुखौटा’बाट निर्देशनमा आएका कलाकार अर्पण थापाले सो फिल्मबाट राम्रो निर्देशकका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। उनले निर्देशन गरेको दोस्रो फिल्म ‘आधा लभ’को अवस्था पनि उस्तै रह्यो। यी दुई फिल्मको व्यापार र दर्शक प्रतिक्रियाबाट तर्सिएका अर्पण आगामी जेठ ११ गतेबाट नयाँ फिल्म ‘सुनकेशरी’ लिएर दर्शकमाझ आउँदैछन्। राजधानीमा बिहीबार एक कार्यक्रमबीच …
काठमाण्डौ, चैत्र ८ । २०३४ सालमा हालका माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जम्मा २३ वर्षका थिए । उनले धनुषा शहिद नगरका लालबाबु हाथीलाई एउटा मार्मिक पत्र लेखे । त्यतिबेला हाथी शिक्षण पेशामा थिए । प्रचण्डको मार्मिक पत्र हाथीको हृदयसम्म पुग्यो र उनी राजनीतिमा लागे । यस्तो थियो वि।सं। …
२०७४, ८ चैत्र बिहीबार २१:०८
बिहे अगाडि नै गर्भवती भएका चर्चित अभिनेत्रीहरु….
एजेन्सी । बलिउडमा सेलेब्रिटीहरू लभलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । तर, बिहेअघि नै गर्भवती हुनुलाई भने बलिउडमा सामान्य मानिँदैन । तर, बलिउडका केही अभिनेत्री बिहेअघि नै गर्भवती भएका छन् । श्रीदेवी फिल्म निर्माता बोनी कपुरले श्रीदेवीको दिल तब जिते, जब श्रीदेवी अमेरिकामा बिरामी आमाको उपचार गरिरहेकी थिइन् । यो समयमा बोनीले …
२०७४, ८ चैत्र बिहीबार २१:०४
भारत । टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने रियालिटी शो ‘बिग बोस’ की सहभागी सोफिया हायतलाई एक पुरुषले २० लाख रुपयाँमा एक रात बिताउने प्रस्ताव गरेका छन् । सोफियाले इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गर्दै यस कुराको खण्डन गरेकी छन् । उनले ती व्यक्तिलाई सबक सिकाउँदै उक्त सन्देश इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन् । २० लाखमा …
२०७४, ८ चैत्र बिहीबार २०:५६
रेप सिनपछि यस्तो बेहाल भएकी थिइन् माधुरी दीक्षित, सुन्दै लाग्छ अच्चम !
बलिउड र हलिउड फिल्मका सिनहरु झट्ट हेर्दा हामीलाई धेरै सामान्य लाग्छन्। तर ति सिनहरु गर्दै निकै तनाव र समस्या हुने गर्छन्। जस्तै फिल्मका स्टन्टदेखि लिएर रेप सिन गर्दा धेरै खतरा र अप्ठयारा परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने हुन्छ। ति घटना त्यस्ता हुन्छन् की कलाकारहरुले ति घटनाहरु जीवनभर विर्सन समेत सक्दैनन्। त्यस्ता दृश्यहरु दर्शकको …
२०७४, ७ चैत्र बुधबार १४:३७
रोल्पामा बृहत् साहित्य सम्मेलन हुने
लिवाङ, चैत ७ । रोल्पामा पर्यटन विकासका लागि साहित्य’ नाराका साथ लिवाङमा वृहत् साहित्य सम्मेलन हुने भएको छ । रोल्पा नगरपालिकाको सहयोग तथा जिल्लाका विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थाको सक्रियतामा आगामी २०७५ जेठ १५, १६ र १७ गते वृहत् साहित्य सम्मेलन हुन लागेको मूलसमारोह समितिका संयोजक डिबी टुहुरोले जानकारी दिए । …